ကောင်းပြီငါအဆင့်ကိုကျော်ပက်လက်ပါပြီသူငယ်ချင်းပုံအားဖြင့်စီရင်တော် 29 အမှတ်အသားငါစစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုဖုန်းခေါ်နှင့်၎င်း၏တစ်ဦးလှည်တဦးတည်းပြောမယ်. ရှင်းလင်းခြင်းတစ်ခုရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ 99% အဆိုပါလုပ်ကွက်များနှင့်ဝင်ငွေ၏ 16 000 ရမှတ်ငါ flashbacks ရှိခြင်းနှင့်ဤဤမျှလောက်များစွာသောတချို့အရှည်တစ်တွင်းကိုရပ်တန့်ဖြစ်လာသည်အဘယ်ကြောင့်သတိရတာပါ.
ငါပွုနိုငျလြှငျသျောလညျးဒါကြောင့်သင်လုပ်နိုင်, ယင်း၏ရုံရှေ့ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်၏ကိစ္စနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရပ်များ၏အကျိုးဆက်များထွက်ရှာဖွေ (wow ငါသည်ငါ့ 10th တန်းဆရာကဲ့သို့မြည်!)
အဆိုပါဗုံးဟာဝါယာကြိုးအိတ်များထိခိုက်သည်အထိအလွန် left ပေါ်မှာရှိသမျှပူဖောင်းများကျူးဧသောအသံကိုအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး, ထို့နောက်သူကဖွင့်မှုတ်! ဤသူသည်သင်တို့အခြို့သောခရီးကိုငါပေးမည်. သင်ထသော့ခတ်ကျောက်ဆောင်မှတံခါးသော့ကိုလျှော့ချသည်အထိတစ်လျှောက်သင့်ရဲ့လမ်းအလုပ်မလုပ်, နှင့်သော့ခအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်တခါသူတို့ကိုလွှတ်ပေးရန်. သင်၏ကျန်ပူဖောင်းများကြိုးစားပါနှင့်ကယ်တင်, သူတို့နေရာလေးကိုမကြာမီကြွလာတော်မူပါလိမ့်မယ်. သင်အီသို့ပယ်ကျောက်တန်းများနှင့်သူတို့စိတ်ဝိညာဉ်သည်သော့ပွင့်ကြပြီးတာနဲ့သင်ကပူဖောင်းများလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်စတင်ရန်စခွေငျးငှါ. သင်တစ်ဦးပူဖောင်းစိမ်းဖြင့်တစ်ကြိမ်အနည်းငယ်လှောင်အိမ်ကိုသော့ဖွင်နိုင်သည်ကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သာကပ်လျက်လုပ်ကွက်တက်မှုတ်ခြင်းဖြင့်, သငျသညျကဘေးကလှောင်အိမ်အတွင်းရှိလုပ်ကွက်ရှိသောသူတို့မူကားစိမ်းဖြင့်ကြသည်မဟုတ်! သငျသညျကိုအောကျတှငျအနေဖြင့်အိတ်များပွင့်လင်းကိုချိုးဖျက်ဖို့ screen ကိုအလုံအလောက်စတင်ကျဆင်းခဲ့ရပြီတစ်ချိန်ကသိပ်ရီစရာမသွားမနေပါနဲ့, တတ်နိုင်သမျှအများအပြားပူဖောင်းများအဖြစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်…သူတို့သည်အစဉ်မပြတ်နေရာလေးကိုအတွက်လာဟန်, ဒါပေမယ့်လှဲချရွေ့လျားကြောင်းမျက်နှာပြင်ကိုစောင့်ရှောက်.
ဒါဟာသင့်ရဲ့ရွေ့လျားန့်သတ်ထားသည်အဘယ်မှာရှိအဆင့်ဒါကြောင့်ဝင်တိုက်ခြင်းမရှိပါ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ firecrackers အကြောင်းကိုမေ့လျော့ dont, အမြော်အမြင်ရှိရှိသုံးခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းကိုချွတ်ထားမှီတိုင်အောင်သင်သည်အခြားဝင်ငွေမစတင်နိုင်မအောကျမေ့. သငျသညျကြီးတွေပေါင်းစပ်၏ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးအစုံဖွင့်ပေါ်တဦးတည်းရှိပါကရှေ့ဆက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံကိုချွတ် set နှင့်ပိုပြီးအနည်းငယ်ရှင်းလင်း. ကတက်ကိုင်ပြီးရွေ့လျားခြင်းနှင့်လုပ်ကွက်သို့မဟုတ်ပူဖောင်းများရှိပါတယ်လျှင်မျက်နှာပြင်စက်စက်ကျ wont ကိုသတိရပါ.
ပိုပြီးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသော့နှင့် firecrackers သူတို့ကိုလွတ်မြောက်စေဖို့စုံလင်သောရှိပါတယ်နေကြတယ်. သငျသညျကိုသှားအဖြစ်စိတ်ထဲ၌သင်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်သိမ်းဆည်းထားပါ, တစ်ဦး licorice နှင့်အတူမျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်အပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေ dont အပေါငျးတို့သအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖြစ်ကြဘယ်မှာအရောင်လုပ်ကွက်၏အိတ်ကျော် left နှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ် '' sorts?’ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရန်ဖြစ်ပါသည် 99% အဆိုပါလုပ်ကွက်၏ ….DOH! ဒါကနည်းလမ်းသင်သာရှိနိုင်ပါသည် 1 လက်ဝဲ! အတူတူအရောင်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်နှင့်သင်တို့သည်ငါကဒီအာမခံအောက်ခြေများအတွက်ဗုံးကိုကယ်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်နေရာလေးကိုအတွက်လာကြလိမ့်မည်, မလွှဲမရှောင်သငျသညျနှစျခုလုပ်ကွက်အတူတက်အဆုံးသတ်မည်…yeah, ငါစိတ်ရှုပ်စရာဖော်ပြထားခြင်းခဲ့ပါ?